‘अहिले कोरोना खोप थोरै छ, वृद्ध जनसंख्यालाई अर्को चरणमा’ – Health Post Nepal
‘अहिले कोरोना खोप थोरै छ, वृद्ध जनसंख्यालाई अर्को चरणमा’
२०७७ माघ २५ गते २०:१४
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना खोपको दोस्रो प्राथमिकतामा वृद्ध-वृद्धालाई नराखेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
वृद्ध–वृद्धामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा उनीहरूलाई राख्नुपर्ने माग उठेको हो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिलो प्राथमिकतामा वृद्ध–वृद्धा नै भए पनि सबैलाई खोप लगाउन नपुग्ने भएकाले समस्या भएको जनाउँछ।
सरकारले जोखिममा रहेका वृद्ध-वृद्धालाई किन खोप प्राथमिकता नदिएको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम प्राथमिकता र खोपको उपलब्धतालाई हेरेर मन्त्रालयले प्लानिङ गरिरहेको बताए।
‘वृद्ध–वृद्धालाई खोप दिने हो भने २० लाख डोज चाहिन्छ। २० लाख खोप आएको छैन। जम्मा पाँच लाख खोप हामीसँग छ’, डा. गौतमले भने, ‘हामी प्रक्रियामा छौं। अलि बढी खोप आउँदा उहाँहरूको पालो आउँछ।’
पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका व्यक्ति सानो समूह भएकाले सबैलाई कोरोना खोप दिन पुग्ने उनले बताए।
त्यही भएर दोस्रो चरणमा यो समूह छानिएको डा. गौतमको भनाई छ। खोपको उपलब्धता र समूहलाई हेर्दै यसैगरी सबै जनतालाई क्रमश: मन्त्रालयले खोप लगाउँदै जाने उनले बताए।
सबै कुरालाई विरोधको नजरले मात्र हेर्ने नभई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि उनको आग्रह छ।
उनले पत्रकार र कुटनीतिक नियोगका व्यक्तिलाई लगाइसकेपछि तीन लाख डोज खोप बच्ने आकलन गरिएको बताए। त्यो खोप भीडभाड हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई लगाइने उनको भनाई छ।
‘वृद्ध–वृद्धालाई लगाउन त देशभरी जानुप-यो। सदरमुकाममा मात्रै लगाउनु भएन। अहिले थोरै खोप भएको अवस्थामा चरण चरणमा लगाउँदा आर्थिक भार पनि धेरै पर्न जाने हुन्छ। हामीले त सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्यो नि?’, उनले भने।